Me, Myself & Irene (2000) | MM Movie Store
ကြှနျတျောတို့ အခဈြတျောကွီး Jim Carrey ရဲ့ နောကျထပျ အလနျးစားရုပျရှငျတဈကား ထပျမံ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ2000 ခုနှဈက ရိုကျကူးခဲ့ တဲ့ Old But Gold ရုပျရှငျ တဈကားဖွဈပါတယျ
IMDb rating 6.6 ရရှိထားပွီး ရုပျရှငျ ဘတျဂကျြ ၅၁ သနျးအသုံးပွုထားကာBox Office မှာ ဝငျငှေ ၁၄၉ သနျး ပွနျလညျရရှိထားပါတယျ
ရိုးသားတဲ့ စိတျစတေနာကောငျးတဲ့ ပွညျနယျသေးသေးလေးက ရဲတပျဖှဲ့ဝငျလေးတယောကျအရမျးဉာဏျကောငျး IQ မွငျ့တဲ့ ခြောခြောလှလှ မိနျးကလေးတယောကျနဲ့အိမျထောငျကရြာက မိနျးမ က ဖောကျပွနျလို့ စိတျဒဏျရာ ရတဲ့အကွောငျးတှကေို Jim Carrey ပီသစှာပဲပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ
မိနျးမထှကျသှားပွီး တခွားသူနဲ့ မှေးတဲ့ သား ၃ယောကျနဲ့ သူ့ကိုခနျြခဲ့ပုံလူတဈကိုယျစိတျ နှဈမြိုး အဖွဈကွုံလာရပုံတာဝနျအရ လိုကျစောငျ့ရှောကျပေးရတဲ့ မိနျးကလေးတယောကျနဲ့အလှဲတှကွေုံရပုံ အစရှိတာတှကေို တသောသောရယျမောနရေငျးကွညျ့ရှုရမှာပါ
တခုပွောစရာရှိတာက တဈကားလုံး ညဈညမျးတဲ့ စကားပွောခနျးတှအေမြားကွီးပါဝငျပါတယျ ဘာမှ မပွငျဆငျ ဆငျဆာမဖွတျပဲ ဒဲ့ပဲ ဘာသာပွနျပေးထားပါတယျHitman’s bodyguard ကို ခငျဗြားတို့ ဆဲလှပွီလို့ထငျနပေါသလားဒီရုပျရှငျသာကွညျ့လိုကျပါ ? ?
ကျွန်တော်တို့ အချစ်တော်ကြီး Jim Carrey ရဲ့ နောက်ထပ် အလန်းစားရုပ်ရှင်တစ်ကား ထပ်မံ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်2000 ခုနှစ်က ရိုက်ကူးခဲ့ တဲ့ Old But Gold ရုပ်ရှင် တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
IMDb rating 6.6 ရရှိထားပြီး ရုပ်ရှင် ဘတ်ဂျက် ၅၁ သန်းအသုံးပြုထားကာBox Office မှာ ဝင်ငွေ ၁၄၉ သန်း ပြန်လည်ရရှိထားပါတယ်
ရိုးသားတဲ့ စိတ်စေတနာကောင်းတဲ့ ပြည်နယ်သေးသေးလေးက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးတယောက်အရမ်းဉာဏ်ကောင်း IQ မြင့်တဲ့ ချောချောလှလှ မိန်းကလေးတယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျရာက မိန်းမ က ဖောက်ပြန်လို့ စိတ်ဒဏ်ရာ ရတဲ့အကြောင်းတွေကို Jim Carrey ပီသစွာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
မိန်းမထွက်သွားပြီး တခြားသူနဲ့ မွေးတဲ့ သား ၃ယောက်နဲ့ သူ့ကိုချန်ခဲ့ပုံလူတစ်ကိုယ်စိတ် နှစ်မျိုး အဖြစ်ကြုံလာရပုံတာဝန်အရ လိုက်စောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်နဲ့အလွဲတွေကြုံရပုံ အစရှိတာတွေကို တသောသောရယ်မောနေရင်းကြည့်ရှုရမှာပါ
တခုပြောစရာရှိတာက တစ်ကားလုံး ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားပြောခန်းတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ် ဘာမှ မပြင်ဆင် ဆင်ဆာမဖြတ်ပဲ ဒဲ့ပဲ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်Hitman’s bodyguard ကို ခင်ဗျားတို့ ဆဲလှပြီလို့ထင်နေပါသလားဒီရုပ်ရှင်သာကြည့်လိုက်ပါ ? ?
101 Dalmatians – Link 2
101 Dalmatians – Link 1
Black Man English Lesson-Link 3